Taliyeyaal cusub oo loo dhaariyey Ha’adaha Ammaanka Soomaaliya (Sawiro) – Radio Daljir
Taliyeyaal cusub oo loo dhaariyey Ha’adaha Ammaanka Soomaaliya (Sawiro)
Maajo 5, 2013 8:01 b 0
Muqdisho 05 May 2013 Munaasabad lagu dhaarinayay taliyeyaasha ciidamada hay?adda nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka iyo taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Xaflada dhaarinta ?oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Fiilo Soomaaliya ayaa ?waxaa ka qeyb galay madaxda sare ee dalka iyo saraakiisha ciidamada dowladda.
Guddoomiyaha maxkamada sare ee dalka Ceydiid ilka xanaf ayaa dhaariyay Taliyaha hay?adda nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka iyo Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya.
Dhawaan ayey aheyd markii golaha wasiiradda Xukuumadda Soomaaliya ay meel mariyeen taliyeyaasha cusub oo loo kala magacaabay Agaasimaha hay?adda nabad sugidda General Bashiir Maxamed Jaamac iyo taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya C/kariim Daahir Saciid.
Masuuliyiintaan cusub ee loo dhaariyey ha?adaha Ammaanka Soomaaliya ayaa waxaa ay ku soo aadayaan? xili ay dawladdu ku mashuulsantahay Ammaanka magaalada Muqdisho.
Maamulka Puntland oo joojiyey inuu canshuurta ku qaado lacagaha Shilin Soomaaliga ha
Caawa iyo Daljir, Sabti, 4, May-2013, Jaamac Cabdiraxmaan Axmed (Daljir Galkacyo)